ကလေးများ Set ဥယျာဉ် Tools များနှင့်အတူတွန်းလှည်း - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: WB1006
ဆိပ်ကမ်း: Ningbo, ရှန်ဟိုင်း, ရှန်ကျန်း
ဤအတူ ကလေးများ '' တွန်းလှည်း ကိုသင်တွန်းလှည်းအဖြစ်သင့်ကလေးကိုညာဘက်ခြမ်းတလျှောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်, ဤသည် ကလေးများ '' တွန်းလှည်း အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, ဒီနည်းနည်းမြေကြီးတပြင်တစ်ပန်းလွယ်ကူသောလက်ကျန်ငွေစာရင်းများအတွက်ကျယ်ပြန့် 32 လက်မဘီးအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ရာဘာဘီးပါရှိပါတယ်။ ဤသည်ဂန္ ဥယျာဉ်ကလေးများရဲ့တွန်းလှည်း ကဖုန်၏ကုဗခြေလျင် heaping 1 လှုံ့ဆျော, ဥယျာဉ်တော်ချင်သူကိုကလေးတွေအဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် ကလေးတွေ '' တွန်းလှည်း ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ဖန်ဆင်းထားသည်, ဒီထုတ်ကုန်, lase ဖို့ဒီဇိုင်းအသက်အရွယ်3နှင့်ထရန်အကြံပြုသည်။
အမှုန့် coated သံမဏိဗန်းနှင့်သံမဏိပြွန် fram
boby အရွယ်အစား: L / H ကို A / C) (မီလီမီတာ) 790x365x370a/b/ ဇ (မီလီမီတာ): 475x370x110
ဘီးအရွယ်အစား: 6.5 "* 2.4"
ဝန် weigth 5kg, ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန် 2.3kg
ကလေးများထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများအတွက်စံပြသတ္တုတွန်းလှည်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ကလေးတွန်းလှည်း Tools များသတ်မှတ်မည်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အာမခံချက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကလေးများအဘို့အဥယျာဉ်တွန်းလှည်း၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ရိုးရာဥယျာဉ် Tools များသံမဏိလက်ဟိုး
bug ကလေးများဥယျာဉ် Tools များသတ်မှတ်မည်ကိုငျတှယျ